Google Play Awards 2019: Ngwa mmeri nke afọ | Androidsis
Google I / O 2019 bụ onye ọrụ ugbu a na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ime ememme mbido afọ a site na ịhọrọ ngwa kacha mma afọ a. Ọ bụ ihe Google Play Awards 2019. Kwa afọ ụlọ ọrụ na-ahazi akara ngosi ndị a, nke ha na-achọ ịmata ngwa na egwuregwu kachasị mma maka gam akporo, dị ka anyị hụrụ na 2018.
Na Google Play Awards 2019 anyị na-achọta ngụkọta nke ngwa itoolu, bụ ndị nke kachasị mma n’ubi ha. Site na onyinye a, ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ịmata ezigbo ọrụ nke ngwa ndị a. N'ihi ya, ewu ewu ha niile ga-abawanye na ụlọ ahịa ahụ.
1 Ahụmịhe nnweta kachasị mma: Na-ele AI
2 Kasị Mma Wellness App: Woebot
3 Mmetụta kachasị mma: Wisdo
4 Kachasị Ahụmịhe Ndụ Ezigbo Ndụ: Echetụbeghị
5 Kasị groundbreaking ngwa: Jiri nwayọọ
6 Ngwa ngwa ngwa: Tick Tock
7 Ngwa kachasị mma maka ahịa ndị na-apụta: Canva
8 Egwuregwu kachasị mara mma: Shadowgun Legends
9 Ọtụtụ egwuregwu na-agbagha agbagha: Marvel Strike Force
Ahụmịhe nnweta kachasị mma: Na-ele AI
Na nke mbụ a, anyị na-ahụ ngwa ndị ahụ na-enyere mmekọrịta nke ndị nwere nkwarụ ma ọ bụ mkpa pụrụ iche, yana ekwentị ha. N'okwu a, ọ bụ Envision AI nke pụtara dị ka onye mmeri. Ọ bụ ngwa na-akọwa olu site na olu ihe niile ị na-ejide igwefoto, ọbụlagodi ederede ederede. Ya mere, a na-ewepụta ya dịka ngwa nke nwere ike ịnwe nnukwu enyemaka maka ndị nwere nsogbu ọhụụ.
Enwere ike ibudata ngwa ahụ maka gam akporo n'efu. Ọ bụ ezie na n'ime ya anyị na-ahụ ịzụrụ ihe.
Developer: Hụ Teknụzụ BV
Kasị Mma Wellness App: Woebot
Akụkụ nke abụọ na Google Play Awards bụ nke a. N'ime ya anyị na-achọta ngwa ndị na-enye ndị ọrụ ohere ibi ụdị kachasị mma nke onwe ha, opekata mpe dịka Google kwuru. Onye mmeri na nke a bụ WoeBot, nke nwere ike ịdị ka ụfọdụ n'ime gị. Anyị na-eche ihu ngwa nke anyị nwere ike ịkọrọ chatbot, nke iji debanye aha uche anyị. Ọ na-enyekwa ohere ịnweta akụrụngwa ndị ọzọ na omume ọgwụgwọ. Ọ nwere ike inye aka maka ọtụtụ ndị ịchọtakwu banyere ọnọdụ ha, dị ka ma ọ bụrụ na ha nwere ịda mbà n'obi.
Nbudata ngwa a maka gam akporo n'efu. Na mgbakwunye, anyị enweghị ịzụta ma ọ bụ mgbasa ozi n'ime.
Woebot: Ọkachamara Nlekọta Onwe Gị
Developer: Ahụike Woebot
Mmetụta kachasị mma: Wisdo
Google Play Awards na-achọ ịkwụ ụgwọ ngwa ndị ahụ emeela ka ndị obodo ha nwee mmetụta dị mma. Onye mmeri na ikpe a bụ Wisdo, ngwa nke na-enye onye ọ bụla ohere ịkọ ahụmahụ ọ gabigara. Ekele maka ngwa ị nwere ike ịchọta ndị mmadụ gabigara otu ihe ahụ. Ya mere, ọ nwere ike inye aka na nke a, ịchọpụta otu ndị a si jisie ike merie ọnọdụ a wee gaa n'ihu. Enwere ọtụtụ ụdị ikpe na ngwa ahụ.
Nbudata ya na gam akporo bụ n'efu. Ọzọkwa, enweghị ịzụta ma ọ bụ mgbasa ozi n'ime ya.
Wisdo, nweta ụbọchị obi ụtọ karịa
Developer: Ụlọ ọrụ Wisdo Ltd.
Kachasị Ahụmịhe Ndụ Ezigbo Ndụ: Echetụbeghị
Neverthink bụ ngwa nwere ihe niile ga - abụ ihe kụrụ na Storelọ Ahịa Play. Ọ bụ ngwa na - enyere gị aka ile vidiyo n’ebughị ụzọ chee echiche. Emere ya maka oge ndị ahụ mgbe anyị chọrọ inwe ụfọdụ ndabere mkpọtụ, ma anyị achọghị ịchọ nke ukwuu. Yabụ, na ngwa a anyị nwere ọwa ọdịnaya 40. Naanị anyị ga-ahọrọ otu n'ime ha na ndị editọ nke ngwa ahụ ga-emere anyị ihe ndị ọzọ. Na mgbakwunye, anyị nwere ike iji ya na Chromecast ma zipụ ọdịnaya ekwuru na TV.
Ngwa kachasị mma iji nweta Chromecast
Nbudata ngwa a na gam akporo n'efu. N'ime enweghị ịzụta ma ọ bụ mgbasa ozi nke ụdị ọ bụla.
Echela: Memes vidiyo izizi
Developer: Echeghị echiche
Kasị groundbreaking ngwa: Jiri nwayọọ
Ngwa nke doro anya na-agbasa na ọnọdụ ndị dị ugbu a, wee si otú a nweta nnweta Google Play Awards 2019. Ọ bụ ngwa ngwa izi ozi ngwa ngwa. Ọ dị ka a ga - asị na anyị na - ezipụ akwụkwọ ozi site na mail, na - eji ngwa na ekwentị anyị n'ọnọdụ a. N'oge a, akwụkwọ ozi ahụ dị n'ebe ndị mmadụ nọ n'akụkụ ọ bụla n'ụwa, ndị na-akọrọ anyị ihe omume ntụrụndụ. Ya mere, ọ na-ewe ogologo oge iji ruo dị ka a ga-asị na ọ bụ ezigbo akwụkwọ ozi. A pụrụ iche ngwa.
Nbudata ngwa a na gam akporo bụ n'efu. Ọ bụ ezie na n'ime ya enwere ịzụrụ ihe.
OWERE - Jikọọ na ụwa
Developer: Nwayọọ nwayọọ Communications Ltd.
Ngwa ngwa ngwa: Tick Tock
Anyi ekwesighi ime ka ya na ndi mmadu na-ese okwu na-ese okwu, nke kpochapuru na mba ufodu. N'okwu a, Tick Tock bụ egwuregwu, ọ bụ ezie ọ bụ egwuregwu egwuregwu. Ya mere, ị ga-eso onye ọzọ gwuo egwu, iji nwee ike mezue egwuregwu mgbagwoju anya nke anyị na-ahụ n'ọtụtụ ọkwa dị na egwuregwu ahụ. Onye ọ bụla ga-ahụ naanị ọkara ihuenyo. Yabụ, ịmekọrịta bụ ihe dị oke mkpa. Wayzọ ọzọ iji mụta ịrụ ọrụ n'otu ìgwè.
Nbudata ya na gam akporo nwere ọnụ ahịa euro 3,39. Na nloghachi, enweghị azụta ma ọ bụ mgbasa ozi n'ime.
Akọrọ Aka: Akụkọ maka Abụọ
Developer: Akụkọ ifo ndị ọzọ
Ngwa kachasị mma maka ahịa ndị na-apụta: Canva
Canva bụ ngwa amaara ama nke na-enye gị ohere iwepụta foto iji rụọ ọrụ na netwọkụ mmekọrịta, ma ọ bụ ụdị ọnọdụ niile. Agbanyeghị na nke a, Google Play Awards na-eji ya akpọrọ ihe njikarịcha na mmegharị nke ngwa maka ahịa na-apụta. Ha arụwo ezigbo ọrụ n’akụkụ a.
Mbudata ya na gam akporo bụ n'efu, ọ bụ ezie na anyị nwere ịzụrụ ihe n'ime.
Canva: imewe, foto na vidiyo
Egwuregwu kachasị mara mma: Shadowgun Legends
Na oge a, Google Play Awards na-agba mbọ iji nyochaa egwuregwu ahụ na ndịna-emeputa ka mma ma ọ bụ ndị ọzọ ihe okike, egwuregwu a bụ onye mmeri n'afọ a. Anyị na-eche ihu onye na-agba ọsọ ọtụtụ egwuregwu, nke nwekwara akụkụ nke egwuregwu igwu egwu. E gosipụtara ya dị ka egwuregwu nwere nnukwu mmasị, yana eserese na-ahapụ ezigbo ụtọ n'ọnụ gị.
Nbudata ya na gam akporo bụ n'efu. Ọ bụ ezie na n'ime anyị, anyị na-ahụ ịzụrụ na mgbasa ozi.
Legends Shadowgun Jogo de Tiro
Ọtụtụ egwuregwu na-agbagha agbagha: Marvel Strike Force
N'ikpeazụ, egwuregwu ọzọ na-enweta ihe nrite na Google Play Awards a 2019. Oge a bụ egwuregwu dabere na ụwa dị ịtụnanya, otu n'ime kacha ọhụrụ na-abịa gam akporo. Ọ bụ usoro ọgụ egwuregwu, nke nwekwara akụkụ nke egwuregwu igwu egwu. O nwere otutu ihe odide, ya na ndi dike na ndi ojoo site na Marvel. Ke adianade do, ọ pụtara ìhè n'ihi na ya ikpọ ndịna.
Nbudata egwuregwu a na gam akporo bụ n'efu. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ịzụta n'ime.
Iju Ebu Force
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Play Awards 2019: Ndị a bụ ngwa kachasị mma nke afọ